Dhageysiga Khudbadaha musharixiinta Galmudug oo Maanta ku beegan | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Dhageysiga Khudbadaha musharixiinta Galmudug oo Maanta ku beegan
Guddiga doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka Galmudug ayaa waxaa ay ku adkeysanayaan inay Maalinta Berito ah dhaceyso doorashada Madaxweynaha Galmudug iyo kuxigeenkiisa,xilli uu weli khilaaf ka jiro howlaha doorashada.
Maanta oo Arbaco ah ayaa la filayaa in Xildhibaannada Cusub ee Galmudug ay kulan yeeshaan,waxaana kulankooda ay ku dhsgeysan doonaan khudbadaha Musharixiinta Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Galmudug.
Ilaa 9 Musharax oo u taagan qabashada xilka Madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa ayaa iska isdiiwaan gelisey Guddiga doorashada,waxaana at kala yihiin.
Shan Musharax uu ku tartan doonta xilka Madaxweynaha kuwaas oo kala ah,
Rasmi afar musharax madaxwayne Galmudug ayaa qaatay shahaadada musharaxnimada Galmudug kuwaas oo kala ah,Axmed Cabdi Kaariye ( Qoor Qoor), Cabdiraxman Axmed Sabriye, Axmed Shire Maxamed (falagle) iyo Axmed Cabdullaahi Samater halka 5 Musharax ay u taagan yihiin qabashada xilka Madaxweynaha Galmudug.
Doorashada la filayo inay Maalinta Berito ah ka dhaco Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa sicad u diidey inay ka qeyb galaan Afar Musharax iyo hoggaanka Ahlusunna,iyaga oo sheegay in hab music ah ay wax ku socdaan.
Ammaanka Guud ee Magaalada Dhuusamareeb ayaa aad loo asteeyey,waxaana macquul ah in xiliga loo asteeyey doorashada Madaxweynaha Galmudug iyo kuxigeenkiisa ay wax iska bedelaan.